सपनामा मन्दिर गएको देख्नुभयो ? यस्तो हुन सक्छ : – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /Intresting/सपनामा मन्दिर गएको देख्नुभयो ? यस्तो हुन सक्छ :
मन्दिरको सपनालाई सही तरिकाले अथ्र्याउनको लागि, तपाईँको जीवनमा के–कस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन् भनेर ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । तपाईँले कस्तो किसिमको मनोवैज्ञानिक अनुभवहरू भोगिराख्नुभएको छ अनि ‘मन्दिरको सपना’को प्रकृति कस्तो छ भनेर पनि बुझ्नुपर्दछ । तब मात्र सहित अर्थ लगाउन सकिन्छ ।भाकल :कहिलेकाहिँ, मन्दिरको सपनालाई अलौकिक शक्ति र ‘भगवान’ले मानिससँग अन्तरक्रिया गर्न खोजिरहेका छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ । सपनामा मन्दिर देख्दा भगवानले दिएको आशिर्वादको बदलामा ‘धन्यवाद’ दिन बाँकी छ भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ ।
त्यसैले, आफ्ना अतीतलाई याद गर्नुहोस्। कतै तपाईँले मन्दिरमा गएर केहि कुराको ‘भाकल’ पो गर्नुभएको थियो कि? यदि त्यस्तो बाँकी छ भने, कुनै बिलम्ब नगरी भाकल गरेको मन्दिर जानुहोस् अनि ऋण चुक्ता गर्नुहोस्।दिव्य आश्वासन:कहिलेकाहिँ, मन्दिरको सपना देख्दा तपाईँलाई कसैले संरक्षण गरिरहेको छ, अथवा कसैले तपाईँलाई आश्वासन दिइरहेको छ भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ । मनोवैज्ञानिक हिसाबले हेर्नुपर्दा, जब तपाईँ दुविधामा पर्नुहुन्छ अनि कसैको सहाराको आश गर्नुहुन्छ भने सपनामा मन्दिर देख्नुहुन्छ ।
यसको मतलब तपाईँलाई कसैले सुरक्षा दिएर राखिरहेको छ भन्न सकिन्छ र तपाईँले आफ्ना सबै पीर(चिन्तालाई भुलेर जीवनमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ । यदि तपाईँ धार्मिक हुनुहुन्छ अनि भगवानप्रति विश्वास गर्नुहुन्छ भने नजिकैको मन्दिरमा गएर भगवानको दर्शन गर्न पनि सक्नुहुन्छ, ताकी तपाईँको विश्वास अझ बलियो होस्।यसैगरी भगवान शिवलाई प्रथम देव मानिन्छ। यो संसार नै शिवको उत्पत्ति रहेको धार्मीक मान्यता छ। शिव भगवानको पुजा सोमबार गर्ने गरिन्छ। किनकी सोम को अर्थ हो ऊँ सहित । त्यसैले सोमबारको अर्थ भयो, ऊँ सहितको दिन । अर्थात जुन दिन शिव भगवानको पुजा गरिन्छ, त्यो दिन नै सोमबार हो।
ऊँ अर्थात प्रथम देव । त्यसैले सृष्टीमा पहिलो देवता शिव हुन्। शिव कारणभूत हुन्। कुनै पनि चीज हुनुको कारण शिवलाई जान्छ। शिवको पाँच मुखपञ्चतत्व हुन्।जुन जीवन उपयोगी छन्। जल, वायु, आकास, अग्नि र जमिनमा नै जीवको निर्माण भएको छ।सोमको अर्को पनि अर्थ छ उमासहित । अर्थात माता पावर्तीसहित शिव । त्यसैले यो दिन शिवसँगै माता पावर्तीको पनि पुजा गर्नका लागि महत्वपूर्ण छ। सोमबार शिव भगवानको पुजा गर्दा सुख र सौभाग्य बढ्ने धार्मीक विश्वास छ।
त्यस्तै सोमको अर्थ हुन्छ सान्त। शिव शान्त र समाधिमा रहने देव हुन्। जसका कारण सोमबार शिवको पुजा गर्नु उत्तम मानिन्छ।पुराणका अनुसार सोमको अर्थ हो चन्द्रमा । किनकी चन्द्र शिवको मुकुटमा रहने गर्दछन्। त्यसैले सोमबार शिवको पुजा गर्दा चन्द्रदेव पनि प्रसन्न हुने विश्वास गरिन्छ।